शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष
मंगलबार, मंसिर ९, २०७७ ०७:३०:३९ युनिकोड
सुत्केरीको मृत्युपछि चिकित्सक फरार
डिसेम्बर ११ सम्म नागरिकले कोरोना विरुद्व खोप पाउन सक्ने
आज सोमबार कति छ सुनचाँदीको मूल्य ?
पीसीआर परीक्षण घट्यो, संक्रमण दर २१ प्रतिशत
ताप्लेजुङ्गको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली
विदेश यात्राका लागि पीसीआर टेष्ट गर्न सरकारी परिचयपत्र अनिवार्य
अब जग्गा बाँझो राख्नेले सरकारी सुविधा नपाउने
आज थपिए १ हजार ६६९ जना संक्रमित, थप १६ जनाको मृत्यु
सिलवालले चलाएको त्यो अपे्रशनः दर्जनौ नक्कली डाक्टर पक्राउ
खनालले चलाएको त्यो अप्रेशनः फर्जी प्रमाणपत्रधारी दर्जनौ इन्जिनियर पक्रउ ?
ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् र छोरी गम्भीर घाइते
पीडितले कहिले पाउने न्याय?
शुक्रवार, मंसिर ५, २०७७ नेपाली हामी
ललितपुर, ०५ मंसिर । ठिक १४ वर्ष अगाडि आजकै दिन तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।
विसं २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए । (संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण ।
शान्ति सम्झौताले निर्धारणा गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही लडाकुले आफूहरुलाई अन्याय भएको र राहत नपाएको बताइरहेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको विषयलाई हस्ताक्षरकर्ताले तिलाञ्जली दिइसकेका छन् । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि महसुस हुनेगरी उपलब्धि नभएको क्षेत्र हो संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगति भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐनमार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । तर दुवै आयोगले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेनन् । कारण थियो– कानुनमा धेरै अस्पष्टता र त्यसमा रहेका केही प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु ।
सन् २०१५ मा नै सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन निर्देशन दियो । तर, राजनीतिक दलहरुले कानुन संशोधन गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएनन् । बरु निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकार नै सर्वाेच्च अदालत गयो ।
सर्वाेच्चले सन् २०२० को अप्रिलमा सरकारले पुनरावलोकनका लागि गरेको आग्रहलाई इन्कार गर्दै सन् २०१५ मा आफूले गरेको आदेशमा कुनै संशोधन नहुने फैसला सुनायो । सर्वाेच्चको निर्णयको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरुमाथि ऐन संशोधन गर्ने दबाब परेको छ ।
यस प्रावधानको अर्थ गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पनि आम माफीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्छ । अदालतले भने यो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै विगतमा कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सर्वाेच्चको फैसला छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन ।
शान्ति प्रक्रियाका १५ वर्षसम्म पनि यसलाई कसरी टुंगोमा लैजाने भन्ने विस्तृत खाका कोहीसँग छैन । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा नपुगेसम्म शान्ति प्रक्रिया विधिवत रुपमा टुंगिएको मान्न नसकिने अनलाईनखबरले लेखेको छ ।
उपत्यकामा थपिए १ हजार २२९ जना संक्रमित
आज थपिए २ हजार १०३ जना संक्रमित, थप १७ जनाको मृत्यु
घरमा दुई श्रीमती हुँदाहुँदै अर्कैकी श्रीमती लिएर भागे वडाध्यक्ष
कोरोनाको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई सरकारले कार्वाही गर्न थाल्यो
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, मंसिर ५, २०७७, ११:०३:००
चितवन घटनाले नेकपा फेरी संकटमा
पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनाः पाईलटको मृत्यु, यात्रु गम्भीर घाइते सोमवार, मंसिर ८, २०७७
सुत्केरीको मृत्युपछि चिकित्सक फरार नेपाली हामी
ताप्लेजुङ्गको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली नेपाली हामी
खनालले चलाएको त्यो अप्रेशनः फर्जी प्रमाणपत्रधारी दर्जनौ इन्जिनियर पक्रउ ? नेपाली हामी
आज उपत्यकामा १ हजार ७ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि सोमवार, मंसिर ८, २०७७
आज थपिए १ हजार ९८० जना संक्रमित, थप १६ जनाको मृत्यु सोमवार, मंसिर ८, २०७७
©Nepali Haami-2020 All rights reserved.